Vivo S9 bụ ama ọhụụ ọhụụ dị elu na Dimensity 1100 na 5G | Gam akporosis
Vivo S9 bụ ama ọhụụ ọhụụ dị elu nwere Dimensity 1100 na 5G
Onye Asia na-emepụta Vivo ekwuputala ngwaọrụ ọhụrụ nke usoro S, ọnụ ya na-adabere na njedebe dị elu na ebumnuche ya bụ iwere usoro iji guzobe onwe ya na China. Vivo S9 rutere mgbe ụfọdụ leaks, gụnyere atụmatụ ya na ụfọdụ nkọwa ya ugbu a gosipụtara.
Vivo S9 mejuputara a imewe na bụ nnọọ reminiscent nke Vivo S8, ya mere ọ ga-aga n'ihu na-egosi akara elu, mgbe niile rere ihe karịrị nde ise nke ụdị S8. Qualitydị elu dị na ngwaike dị n'ime, nzọ ahụ bụ ịga n'ihu na-atụkwasị obi MediaTek mgbe ọ na-arịgo CPU ya.
1 Vivo S9, njedebe dị elu na njikọta 5G
2 Ike batrị dị elu
3.1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
Vivo S9, njedebe dị elu na njikọta 5G
Ihe ngosi ngosi nke Vivo S9 gosipụtara ụdị ihu 6,44 nke AMOLED nwere mkpebi HD zuru oke, ọnụego ume ọhụrụ bụ 90 Hz na nlele mmetụ 180 Hz. N'ihu ihu ihu n'ihu nwere 93%, ọkwa kachasị elu bụ ọkwa nke nwere ihe mmetụta abụọ.
Ofbụrụ nke S9 bụ Dimensity 1100 si MediaTek, GPU bụ Mali-G77 MC9, Ncheta RAM ga-agbanwe n'etiti 8 na 12 GB LPDDR4x, mgbe na nchekwa e nwekwara nhọrọ abụọ: 128 na 256 GB UFS 3.2. Ọ ka ga-ahụ ma ọ ga-abịa na oghere MicroSD ma ọ bụ na ọ gaghị abịa, ebe ọ na-enweghị jaketị isi.
Igwefoto azụ dị atọ, nke mbụ bụ 64pipixels, nke abụọ bụ 8 megapixel obosara n'akụkụ na nke atọ bụ 2 megapixel nnukwu. Na ihu nwere anya m abụọ, nke mbụ bụ megapix 44, nke abụọ bụ 8pipixel wide angle.
Ike batrị dị elu
Batrị ahọrọ maka Vivo S9 bụ 4.000 mAh, kwuru na onye nrụpụta ahụ, ọ ga-ezuru ya nri ụbọchị niile, na-adịgide ụbọchị zuru oke yana iji ya eme ihe, ebe ọ na-erule egwuregwu na elekere 9. Onye na-emepụta ihe nwere ike dochie ya, ebe ọ bụ na a ga-ewepụ ya n'ihu.
Ihe ngwa ngwa bụ 33W, chaja na-abata na igbe ahụ na USB-C iji nyefee data kwa na PC na njikọ ya na ngwaọrụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, S9 na-anabata ekweisi site na ọdụ USB-C. na site na Bluetooth, nhọrọ abụọ ahụ dị irè maka ojiji.
Nwere modem 5G, Dimensity 1100 na-akwado iche iche site na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC na USB-C dị ka ọdụ ụgbọ mmiri maka ịkwanye gị na ekweisi gị. Akara mkpisiaka na-abịa n'okpuru ihuenyo, enwere ike ịhazi ya ozugbo ịmalite ekwentị, ịnwekwara ike itinye mkpọchi ahụ site na koodu.
Sọftụwia ahụ bụ gam akporo 11, Ọ na-abịa na mmelite kachasị ọhụrụ maka ọnwa nke ọnwa Febụwarị, nke ọ na-agbakwunye ọtụtụ ngwa site na ụlọ ọrụ Vivo. Ngwurugwu omenala bụ OriginOS 1.0, ọ na-ekwe nkwa ọtụtụ atụmatụ dị mkpa, yana ịdị ngwa ngwa ma nwee ọtụtụ nhọrọ nhazi.
Dị ndụ S9
IKIRU 6.44-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi zuru ezu HD + (2.400 x 1.080 pikselụ) / Nwee ume ọhụrụ: 90 Hz / Mmetụta emetụ: 180 Hz
Nhazi MediaTek Dimens 1100
Kaadị grafik Mali-G77 MC9
Nchekwa n'ime 128/256GB UFS 3.2
Gbanwee CAMERA 64 MP Isi ihe mmetụta / 8 MP Wide Angle Sensor / 2 MP Macro Sensor
N'ihu CAMERA 44 MP mmetụta / 8 MP obosara n'akuku ihe mmetụta
OS Gam akporo 11 na OriginOS 1.0
UMUAKA 4.000 mAh na 33W ngwa ngwa
Njikọ 5G / WiFi 6 / Bluetooth 5.1 / GPS / NFC / USB-C / Dual SIM
NDỊ ọzọ N'okpuru ihuenyo mkpisiaka agụ
Mbibi na ibu ibu Ka ekwenye
El Vivo S9 dịworị na China na nhọrọ atọ agba dị iche iche, na acha uhie uhie, pealu na acha anụnụ anụnụ. Dị 8/128 GB na-efu CNY 2,999 (euro 384), ụdị 12/256 GB na-abawanye na CNY 3,299 (ihe dị ka euro 423 na mgbanwe ahụ). A maghị ịdị na mpaghara ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Vivo S9 bụ ama ọhụụ ọhụụ dị elu nwere Dimensity 1100 na 5G
Etu ị ga-esi mee ka nbudata Google Chrome rụọ ọrụ iji chekwaa data